Imiqondiso suggesting ukuba umntu ufunzele kuba ezinzima budlelwane - Dazzling Iindaba
Imiqondiso suggesting ukuba umntu ufunzele kuba ezinzima budlelwane — Dazzling Iindaba
Ngenxa yokuba siphila kulo base ukuba abantu bamele constantly ikhangela endaweni yabo emhlabeni, simele hayi kuba surprised ukuba wonke umntu ungathanda ukuba kuba kulungile-umbutho kwaye iityuwadefault colour ubomi. Ngelishwa, rhoqo ezi nzame end kwi-disappointment okanye tears ukuba sithanda ngenye uphephe. Ngomhla othile ubudala, thina care malunga uzinzo kwaye ufuna kuba iqabane lakho elandelayo kuthi ukuba uyakusinceda bedlule ubomi. Nangona kunjalo, kunzima ukuba khangela ukuba umntu ufuna kuhlangana kunye thinks seriously malunga nathi. Baninzi abantu ayoyika ka-ezinzima budlelwane nabanye ngenxa yokuba ucinga ukuba abafazi uza umda inkululeko yabo. Ngoko ke ungakwazi njani khangela ukuba umntu ngenene nokukhathalela izinto malunga nawe.
Ekubeni a injongo ebomini kakhulu ebalulekileyo, drives kwethu, motivates kwaye inika intsingiselo ekubeni. Ngoko ke, abantu abaninzi misela ngokwabo ukuba ingaba ingozi enkulu imbono kwaye azame kuba nabo bonke ukomelela kwabo. Yiyo ke kwi budlelwane ngu kukunceda kakhulu ikhangela umntu lowo uza zange thintela okanye inhibit kuwe. Umntu abo ngokuphonononga kufuneka kuphunyezwe imbono iya kubonisa njani kakhulu yena nokukhathalela izinto malunga nawe. Ukuba lowo ngokongezelelweyo lukhuthaza onke yakhe ingqalelo kwindlela yakho ilungile, oko kuthetha ukuba uya ufuna formalize yakho kubudlelwane kwi ngexesha.
I-ebukeka nto sinokubona kwi kobuso omnye umntu wakhe ncuma
Expressing emotions nge ncuma baqinisekisa ukuba omnye umntu uza isaziso traits kuwe. Uninzi abantu xa sukuba onomdla kuso abafazi ngokubanzi ncuma subconsciously xa bebona zabo oyintanda omnye. Yiyo xa amadoda jonga zabo girlfriends ixesha elide kunye ncuma ukuba seriously malunga elide kwaye ndonwabe budlelwane. Umntu olilungu constantly ukuzama ukufumana excuses hayi kuhlangana nawe akusebenzi deserve a ngomzuzu yakho exabisekileyo ixesha.
Ukuba omnye umntu ugcina ukungahoyi kwethu, simele makube khona
Kunjalo, kufuneka ukhumbule ukuba nantoni na kungenzeka kumthandazo ubomi, staying elide emsebenzini, ekubeni elinye idinga. Ngoko ke, xa umntu kuni kuhlangana kunye ayikho ikhangela excuses wonke omnye ixesha, ufuna ukuchitha kangangoko ixesha kunye nawe kangangoko kunokwenzeka kwaye sifuna ukwandisa yakho kwintlanganiso, oko kuthetha ukuba uya thinks malunga nawe seriously. Kwi-misela century, into yokuqala ukuba abantu abaninzi ingaba emva waking phezulu ngu ikhangela ngaphandle imiyalezo emitsha efowunini. Ukuba ke, kutheni abantu abaninzi zama impress umfazi kwaye thumela umyalezo wakhe yonke imihla esithi, ‘molo’. Uninzi abafazi, ngumba obaluleke kakhulu umsebenzi osemqoka, ngenxa yokuba kukholelwa ukuba iqabane lakho thinks malunga nabo ukususela ekuseni kakhulu. Kwaye bamele ndonwabe ukwazi ukuba babe kwimali zabo, umntu ke, khumbula ukuba lonke ixesha. Kwiindawo ezininzi amaxwebhu, sinokubona njani lovers thumela imiyalezo ngamnye ezinye ekuseni. Uninzi abafazi njenge surprises akukho mcimbi yintoni, kuba kubo a uphawu ukuba umntu ufumana ukucinga, esinenkathalo kwaye umdla kubo. Ngoko ke, ukuba yakho umntu esiza umsebenzi wakho okanye apartment yakho free ixesha, uyakwazi kuba uvuma kwaye zolile malunga budlelwane. Gentlemen abo zama ukubonisa elikhulu inzala zabo girlfriend kuba ngcono kakhulu ithuba a ndonwabe kwaye siphumelele budlelwane. Ayithethi ukuba kufuneka kuba nantoni na expensive, ngamanye amaxesha kunzima kukunceda kakhulu yokuchitha yure okanye ezimbini kwaye ilungiselela into eza surprise enye nesiqingatha. Abaninzi couples ndiyakuthanda ukuchitha ixesha kunye kangangoko kunokwenzeka. Akukho nto engaqhelekanga malunga nayo de asinaphawu qala neglecting imisebenzi yethu. Ngamanye amaxesha oko kungenzeka a casual umhla ekhaya, ngelinye ixesha oza i restaurant. Ngexesha ntlanganiso, kubalulekile kukunceda kakhulu ke le cinema, umkhenkce cream okanye nkqu ukuya park kuba hamba, ukuchitha ixesha kunye. Ukuba yena ezama ukuba impress wena kunye izimvo kuba umhla, uyakwazi qiniseka ukuba akanguye kuphela anomdla kwenu, kodwa care malunga into oyithethayo kwaye ucinge. Kwaye khumbula wonke umntu abo nokukhathalela izinto malunga yokufumana a iityuwadefault colour budlelwane kufuneka rhoqo ncuma ukubonisa ukuba yena likes yokuchitha ixesha kunye umntu. Njengoko sonke siyazi, i-valentine ngu Mhla sesinye mihla ngexesha apho abathengisi bathenga ngamalungelo imbali wemiceli-profits xa oko iza uthengisa sweets kwaye iintyatyambo. Kodwa sithande umntu akufunekanga umda ngokwakhe kuphela zinika lunika yakhe iqabane lakho kwi-i-valentine ke, Ngosuku, umhla wokuzalwa okanye abafazi ngu mhla okanye ngokulula esithi ngomhla omkhulu ezithile. Kwi-budlelwane kanjalo ezincinane gestures counts, ezifana ukuhlamba dishes, vacuuming okanye ilungiselela sakusasa. Yonke into eyindoda ingaba ukubonisa girlfriend yakhe ukuze abe nokukhathalela izinto malunga yakhe kwaye ngokuphonononga wakhe, yena uya kuthabatha kunye ukuthathela ingqalelo kwaye admiration. Kwi-era loluntu malunga, ukubonelelwa ngabantu ukuzama ukuthutha zabo zimvo nge-usharedi umculo. Ingakumbi kulutsha ukwabelana nabo songs ukuba ingaba oku intsingiselo efihlakeleyo ezaziwayo kuphela ngumntu yokuba ufuna impress. Enjalo ingoma kufuneka ube romanticcomment ingoma okanye into oko kukuthi enxulumene ne-ethile kumntu thina dedicate le ngoma. Oku enkulu, indlela ukuya kuxelela abanye umntu njani thina uzive njani kakhulu thina care. Abantu abaninzi bazive uxinzelelo exerted yi-bume kwi-funa yesibini nesiqingatha a lifetime. Kanjalo, baya care yintoni abanye banokuthi ukuba ndithi malunga umntu baya kuba zifunyenweyo. Ukuba lowo thinks seriously malunga nani, akasayi care ukuba abahlobo bakhe ngathi wena okanye ukuba abazali bakhe uyala kuye ukubona kuwe. Umntu ngothando nokukhathalela izinto kuphela malunga umntu abe sele esikhethiweyo. Ngoko ke, eyona ndlela kukuba landela eyakho inyathelo nje kwaye hayi nakekela kwabanye abantu. Ngamnye kuthi kukuba ezahlukeneyo kwaye kufuneka sikhumbule ukuba. Eyona nto ibaluleke kakhulu kuyo nayiphi na budlelwane nabanye uluthando, mutual ngokubhekiselele kwaye isakhono rely ngamnye enye
← COM unxibelelwano-Arhente, lwengingqi kwaye yehlabathi! - COM
Iintlanganiso ngaphandle yobhaliso →